NextMapping | नेतृत्व प्रशिक्षण
नेक्स्टमैपिंग With को साथ नेतृत्व प्रशिक्षण
कामको भविष्यलाई नेताहरू र टोलीहरूद्वारा नयाँ सीपहरूको आवश्यक पर्दछ।
अमेजन जस्ता कम्पनीहरूले कार्यबललाई पुन: स .्कलन र पुन: निर्धारण गर्न अरबौं लगानी गरिरहेका छन्। भविष्य तयार रहन को लागी दुबै रोजगारदाताहरु र कामदारहरु मा छ र यो जीवनभर शिक्षा मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
ठोस र शक्तिशाली परिवर्तन गर्न नेताहरू र टीम सदस्यहरूले व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्दछ। व्यवहार परिवर्तनको उत्तम तरिका भनेको के हो भनेर सिकेको कुराको वास्तविक समय अनुप्रयोगको साथ दोहोर्याएर हो।
हाम्रो NextMapping ™ नेतृत्व प्रशिक्षण वस्तुतः जुम मार्फत उपलब्ध छ, अनलाइन कोर्सहरू कामको भविष्यमा केन्द्रित छन् साथै अनुकूलित प्रशिक्षणहरू जुन वेबिनार मार्फत वितरण गर्न सकिन्छ वा तपाईंको ईन्ट्रानेटको लागि सेतो लेबल लगाईन्छ।
2030 कस्तो देखिन्छ ...
… यदि तपाइँ तपाइँको टीमहरु को लागी उन्नत कौशल विकास मा तपाइँको लगानी uped?
के तपाई र तपाईका नेताहरू भविष्यलाई दिमागमा राख्दै हुनुहुन्छ?
आजको कार्यस्थलको द्रुत गतिमा वास्तविकतामा मुख्य प्रतिस्पर्धी फाइदा भनेको अधिकांश विकसित नेताहरू र टोलीहरूको साथ कम्पनी हो।
तपाईंको उद्योगमा चलिरहेको परिवर्तन र मागहरू पूरा गर्न तपाईंको जनतासँग नवीनतम र अत्याधुनिक प्रशिक्षण र कौशल विकास छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न तपाईंको योजना के हो?
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि मिलेनियल्स र जेन जेड लामो समय सम्म कम्पनीहरु को लागी रहन्छ जुन प्रशिक्षण को माध्यम बाट चलिरहेको शिक्षा र विकास को अवसर प्रदान गर्दछ।
अनुसन्धानले यो पनि देखाउँदछ कि परम्परागत रोजगार र भूमिकाहरू विगतको कुरा हुनेछ र भविष्य कार्यस्थलहरूमा पूर्ण समय, आंशिक समय र स्वतन्त्र आउटसोर्स कामदारहरूको संयोजन हुनेछ।
आवश्यक सीपहरू ...
यो द्रुत परिवर्तनशील भविष्यमा नेभिगेट गर्न आवश्यक कौशल समावेश:
जानकारीको विशाल मात्रामा ह्यान्डल गर्न र कार्यको उत्तम पाठ्यक्रम बुझ्न क्षमता
साहस, दिशा, विश्वस्तता र दर्शनको साथ परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने क्षमता
एकाधिक प्रस understand्ग बुझ्ने क्षमता र विविध सरोकारवालाहरु लाई कुराकानी गर्न
सहकार्य र विविध व्यक्तित्वको साथ व्यक्तिविशेषसँग नवीनको क्षमता
'पहिलो व्यक्ति' मा प्राथमिक फोकसको साथ प्रविधि उपयोग गर्न सक्ने क्षमता
'मानव अन्तरक्रिया कौशल' को कार्य कौशलको आवश्यक भविष्यको लाभ उठाउने क्षमता
मुख्य कार्यकारी अधिकारीको% 76% ले हामी २० 2030० सम्म जाँदा प्रमुख फोकसको रूपमा नेताहरू र टोलीहरूको लागि भावी तयार कौशल विकासको उल्लेख गर्दछ।
70% संगठनहरूले क्षमता अन्तरहरूलाई उनीहरूको शीर्ष पाँच चुनौती मध्ये एकको रूपमा उद्धृत गर्छन्।
केवल 49% कर्मचारीहरू भन्छन तिनीहरूका कम्पनीहरूले कौशल प्रशिक्षण र बृद्धि अवसरहरू प्रदान गर्छन्।
कौशल विकासको लागि एक नयाँ दृष्टिकोण
विगतका परम्परागत प्रशिक्षण दृष्टिकोण भविष्यको लागि नेताहरू र टोलीहरू तयार गर्न गइरहेका छैनन्।
कौशल विकासको लागि नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ - नयाँ दृष्टिकोणमा पाठ्यक्रमहरू समावेश छन् जुन काममा वास्तविक समयको स्थितिसँग सम्बन्धित छ। NextMapping TM मा हाम्रा परामर्शदाताहरू प्रशिक्षण रणनीतिमा प्रमाणित हुन्छन् जुन हाम्रो NextMapping ™ प्रक्रियाको साथ प .्क्तिबद्ध हुन्छन्।
तालिमलाई 'स्टिक' बनाउनको लागि हाम्रो स्वामित्व प्रक्रियाले 90 ०% ++ धारणा दर, रोजगार पोस्ट प्रशिक्षणमा 70०% आवेदन दर र रोजगार प्रदर्शनमा दीर्घकालीन मापनयोग्य सुधार सुनिश्चित गर्दछ।
प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पूरा गर्दा परिणाम समावेश:
नेता र टोली कौशल स्तर बृद्धि रूपमा व्यापार वृद्धि वृद्धि भयो
नेताहरू र टोलीहरूबीच वृद्धि भएको नवीनता र तालमेल
उच्च कुशल र सशक्त टीमका सदस्यहरूका कारण सिर्जनात्मक ग्राहक समाधानहरू बढ्यो
सबै कर्मचारीहरु द्वारा प्रेरणा र संलग्नता बढेको
उच्च प्रदर्शन प्रतिभा भर्ती र कायम गर्न क्षमता वृद्धि भयो
भविष्यमा केन्द्रित दृष्टि र लक्ष्य सिर्जना गर्न नेतृत्व र टीमको पign्क्तिबद्धता बढाइयो
हामी व्यक्ति र जूम वा वेबएक्स मार्फत भर्चुअल, अनलाइन भिडियो प्रशिक्षण र गामिफिकेसन सहित व्यक्तिगत वितरण विधिहरूको माध्यमबाट नेतृत्व र टोली प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछौं।
हाम्रो कार्यक्रमहरूको सबै स्नातकहरू NextMapping completion पूरा हुने प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दछ।